သာကေတရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
သာကေတမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာရှိ မြေကွက်(ထောင့်ကွက်) အမြန်ရောင်းမည်
သာကေတမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာရှိ မြေကွက်(ထောင့...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10006545 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
သာတေကမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်းမကြီးကျောကပ်ရှိ မြေကွက်ကျယ် ရောင်းမည်။ (အငှားညှိနှိုင်း...
သာတေကမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်းမကြီးကျောကပ်ရှိ မြေကွက်ကျယ် ရောင်းမည်။ (အ...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10023295 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
သာကေတမြို့နယ်၊ ကမာကြည်ကမ်းသာယာအိမ်ရာရှိ လုံးချင်းအိမ် (ထောင့်ခြံ) ရောင်းမည်
သာကေတမြို့နယ်၊ ကမာကြည်ကမ်းသာယာအိမ်ရာရှိ လု...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10023274 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
09421107446 . 09444434772 . 0943082052
ပေအကျယ် ( 20×60 ) 2Rc ရောင်းမည်။
-လိပ်စာ : မြို့မလမ်း ...
2,350 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9993241 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
သာကေတမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာရှိ RC2ထပ်ခွဲ + RC1 လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်
သာကေတမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာရှိ RC2ထပ်ခွဲ +...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10023386 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ပေအကျယ်(၁၀ × ၆၀)၂ ထပ်အိမ် တိုက်သစ် မြောက်လှ့ည် ရောင်းမည်
လိပ်စာ-ယမုံနာ ၂ လမ်းမြောက် မာန်ပြေ မှတ်တ...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10031613 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
သာကေတ၊ မာန်ပြေ(၃)အရှေ့တွင် ပြင်ဆင်ပြီး မြေညီတိုက်ခန်း ရောင်းပါမည်။
သာကေတ၊ (၃)မာန်ပြေ အရှေ့ မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ လမ်းသ...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9960407 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10038762 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
သာကေတမြို့နယ်တွင် ရုံးခန်းဖွင့်ရန် မိသားစုနေထိုင်ရန်သင့်တော်သော 2RC လုံးချင်းအိမ်အရောင်း။...
4,200 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10037636 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
1,950 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10037516 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
4/မြောက်ရပ်ကွက်၊ လမ်းမကြီးပေါ် (ပေ 20x54 ပေ) (22ပေx60ပေ) ပေါ်ဆောက်ထား တိုက်ခန်း အရောင်း
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10036286 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
Daw Than Than Htay Real Estate ပိတ္ရန္
သုမန(၅)ရပ်ကွက်၊ ရှုခင်းသာဒဲ့ဆင်းလမ်း (10ေပx60ေပ) 2ထပ္အိမ္ ရောင်းမည်။
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10035707 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10034229 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
M.M.K Real Estate ပိတ္ရန္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10034228 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10034227 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
☃️☃️ #သာကေတမြို့နယ် ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီးပေါ် လူစည်ကားရာ နေရာကောင်း မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။☃️☃️...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-10034163 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္